Green Exhbition အား ရွေ့ဆိုင်းခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » Green Exhbition အား ရွေ့ဆိုင်းခြင်း
Green Exhbition အား ရွေ့ဆိုင်းခြင်း
Posted by we R one on Nov 21, 2011 in Education, Environment, News |2comments
နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ၇က်နေ့တွင် ကျင့်ပမည့် အစိမ်းေ၇ာင် ပြပွဲ အား… ဒီဇင်ဘာ လ ၄၇က်နေ့ သို့ရွေ့ဆိုင်းလိုက်ပါသည်။ ဓါတ်ပုံများ ၊ ကာတွန့်များ ၊ ကဗျာ များ ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ၇က်နေ့ အထိ ပေးပို့နိုင်ပါသည် ။ ပေးပို့၇န် အီးမေလ် လိပ်စာမှာ..info@my.asia ဖြစ်ပါသည်။
So, with the purpose of increasing environmental awareness among young people, Myanmar Youths in Action will be holdingaGreen Exhibition on Sunday, December 4, 2011 from 3:00pm to 5:00pm at Sein Lann So Pyay Garden on Inya Road. We will display photo essays, poems and posters about effected environment.
We cordially invite photographers to exhibit the photos and poets and cartoonists to display their poems and cartoons relating to the issue of “Green” or “Environment”.
အစိမ်းရောင်လှုပ်ရှားမှုကျမှ ဘာကွန်းမန့် မှမရေးကြပါလား။
စာကလေးနဲ့ စိမ်းပေးလိုက်ရင် ပိုက်ဆံပေးရမှာကျနေတာဘဲ။
ဒါပေမယ့်ဘာကို စပ်ဆိုရမှန်းမသိဘူး ဒါပေမယ့်လဲ စပ်တော့စပ်လိုက်မယ်။
သစ်တောတွေကိုမခုတ်ကြပါနဲ့သံယံဇာတတွေကိုမတူးကြပါနဲ့ကမ္ဘာကြီးကို မပူနွေးစေကြပါနဲ့ 
စိတ်ကြီးစိုးလို့ ကမ္ဘာကြီးထိုးရင် နင်တို့ တွေကွဲလိမ့်မယ် သတိထားကြ။
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ရင်ကွဲသံစဉ်တွေက တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ ပိုစိတ်လာတာကိုကြောက်ကြပါ။
ဒို့ ကတော့ကြောက်လို့ သစ်ပင်စိုက်တယ်။ ကားမစီးဘူး။ အဲယားကွန်းမသုံးဘူး။ သိုက်မတူးဘူး။ ရေမွှေးမသုံးဘူး။ ထင်းလဲမသုံးဘူး။
တိုးတိုးလေးပြောသူများတွေကြားသွားမယ် အဲအဲရေခဲသေတ္တာတော့သုံးတယ်။ မီးသွေးကတော့ရှောင်မရဘူးမီးပျက်လို့ ။
ဒါဘဲပြောမယ် စိမ်းစိမ်းစိမ်း စိမ်းသရဖူစိမ်း အရမ်းအရမ်းကိုစိမ်း…..စိမ်း….စိမ်း……
ကဗျာ တို့ ဝတ္ထု တို့ ကို အင်းဂလိပ် လိုဘဲ ရေးပို့ ရမှာလား
မြန်မာလိုကော ရေးပို့ လို့ ရမလားလို့ 